Mpitsara 2 - Ny Baiboly
Mpitsara toko 2
Faninian'ny anjely an'Israely - Fivadihan'Israely tamin'Iaveh - Ny firenena hafa tafajanona tao anilan'Israely.
1Ary niakatra avy any Galgalà ny anjelin'ny Tompo nankany Bokima, ka nanao hoe: Nitondra anareo niakatra avy tany Ejipta aho; dia nampiditra anareo amin'ny tany izay nianianako tamin'ny razanareo homena anareo. Hoy aho hoe: Tsy hanatsoaka ny fanekeko aminareo mandrakizay aho, 2ary hianareo kosa tsy hanao fanekena amin'ny mponina amin'ity tany ity fa handrava ny oteliny. Kanjo tsy nihaino ny feoko hianareo. Ka ahoana no nanaovanareo izany? 3Ary izaho koa nilaza nanao hoe: Tsy horoahiko eo anoloanareo ireny ka ho eo anilanareo izy ary ny andriamaniny ho fandrika ho anareo. 4Mbola nilaza izany teny izany tamin'ny zanak'Israely ilay anjelin'ny Tompo dia efa nanandra-peo nitomany ny vahoaka. 5Ka nomeny anarana hoe Bokima izany fitoerana izany, ary nanolotra sorona ho an'ny Tompo teo izy ireo.
6Rahefa nampodin'i Josoe ny vahoaka, dia samy nankany amin'ny lovany avy ny zanak'Israely mba haka ny tany. 7Nanompo an'ny Tompo ny vahoaka, tamin'ny andro rehetra niainan'i Josoe, sy tamin'ny andro rehetra niainan'ireo loholona velona taoriany, izay nahita ny asa lehibe rehetra nataon'ny Tompo ho an'Israely. 8Maty tamin'ny fahafolo amby zaton'ny taonany Josoe, zank'i Nona, mpanompon'ny Tompo. 9Nalevina tao amin'ny faritany zara taniny izy, dia ao Tamnata-Heresy amin'ny tendrombohitr'i Efraima avaratry ny tendrombohitra Gaasa. 10Ary voaangona any amin'ny razany koa izany taranaka izany; ka taranaka hafa, tsy nahalala an'ny Tompo na ny asa nataony ho an'Israely, no nitsangana nandimby azy.
11Nanao izay ratsy eo imason'ny Tompo ny zanak'Israely, fa nanompo ireo Baala. 12Nafoiny Iaveh Andriamanitry ny razany, izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Ejipta; fa andriamani-kafa, tamin'ireo andriamanitry ny firenena manodidina azy no narahiny, sy niankohofany teo anatrehany, ka nampahatezitra an'ny Tompo izy ireo. 13Fa Iaveh nilaozany, ary Baala sy ny Astarte notompoiny.
18Nony nanangana mpitsara ho azy ireo Iaveh, dia nomban'ny Tompo izany mpitsara izany ka namonjy azy ireo tamin'ny tànan'ny fahavalony, tamin'ny andro rehetra iainan'ny mpitsara; satria nalahelo Iaveh noho ny fitarainany teo anoloan'ireo nampahory sy nampijaly azy. 19Rahefa maty anefa ny mpitsara dia nihasimba indray izy mihoatra noho ny razany indray aza, ka lasa nanaraka andriamani-kafa mba hanompo azy sy hiankohoka eo anatrehany, fa tsy niala amin'ny hadisoany amam-pikiribibiany. 20Tamin'izany dia nirehitra tamin'Israely ny fahatezeran'ny Tompo ka hoy izy: Noho ity firenena ity nivadika tamin'ny fanekena nandidiako ny razany ary noho izy ireo tsy nihaino ny feoko, 21dia tsy hisy horoahiko eo anoloany ireo firenena navelan'i Josoe tamin'ny nahafatesany, na dia iray aza; 22ireo no hizahako toetra an'Israely, na hazoto hanaraka ny làlan'ny Tompo izy, toy ny nahazoto ny razany, na tsia. 23Dia navelan'ny Tompo handry fahizay ireo firenena tsy mbola natolony teo an-tànan'i Josoe ireo, fa tsy nalaky noroahiny. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0948 seconds